के ट्विटरको ग्रोथ मेटर छ? | Martech Zone
शुक्रबार, जनवरी 9, 2009 सोमबार, नोभेम्बर 4, 2013 Douglas Karr
ट्विटर पक्कै २०० 2008 मा मेरो मनपर्ने सूची मा छ। मलाई यो प्रयोग गर्न मन पर्छ, मनपर्दछ एकीकृत उपकरण, र यो प्रस्ताव गर्दछ कि संचार को रूप प्रेम। यो गैर घुसपैठो, अनुमति-आधारित, र छिटो हो। Mashable मा एक महान पोस्ट छ ट्विटरको बृद्धि, 752 XNUMX२%। साइटमा भएको वृद्धिमा उनीहरूको एपीआई मार्फत विकास समावेश हुँदैन, त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै धेरै ठूलो छ।
तर के यसले फरक पार्छ?
कम्पनीहरू जसले सोशल मिडियाको साथ जानकार छन् उनीहरूले निश्चित रूपमा ट्विटरलाई उनीहरूको माध्यमको सूचीमा लिभ्रेटमा राख्नुपर्दछ। जे होस्, ट्विटर अझै पनि बजारका लागि अवसरको सागरमा एक सानो माछा हो। कुनै पनि माध्यमको तीन विशेषताहरू जुन नजिकबाट हेर्न आवश्यक छ:
पुग्नु - उपभोक्ताहरूको कूल भोल्युम के हो जुन माध्यम मार्फत पुग्न सकिन्छ?
नियुक्ति - मेसेजि directly उपभोक्ता द्वारा सिधा पढिएको छ वा यो अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई क्लिक गर्न उपलब्ध छ?
आशय - के उपभोक्ताको उद्देश्य तपाईंको उत्पादन वा सेवा खोज्नको लागि हो, वा एक्लोपिसन पनि अपेक्षा गरिएको थियो?
इन्टरनेट मा मान्छे नयाँ के कुरा गर्न को लागी प्रेम गर्छन् र सबैले पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलो को लागी आशा गर्छन्। व्यवसायहरूको लागि, यद्यपि, अर्को माध्यममा फार्मलाई शर्त लगाउनु अघि तिनीहरूको विश्लेषणहरू आवश्यक हुन्छ। यहाँ भ्रमणको एक जोडी चार्टहरू र पृष्ठदृश्याहरू छन् गुगल, फेसबुक र twitter। गुगल, अवश्य पनि, एक खोज ईन्जिन हो। फेसबुक एक सामाजिक नेटवर्क हो र ट्विटर एक माइक्रो ब्लगिंग प्लेटफर्म हो।
ट्विटर अझै पनी गुगल र फेसबुकले पाएको भ्रमणको तुलनामा खडा हुन्छ - जुन परिप्रेक्ष्यमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
मान्छेहरूको समयमा फेसबुकको बारेमा कुरा गर्न मनपर्छ, र फेसबुकले यसको बृद्धिको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँदछ, सदस्यतामा फेसबुकको वृद्धि ती प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नतासँग मेल खाँदैन। वास्तवमा तथ्या .्कले देखाउँदछ कि फेसबुकले पृष्ठ दृश्य कायम राख्नका लागि मात्र यसको सदस्य आधार बढ्न जारी राख्नुपर्दछ। उनीहरूसँग एक अत्यन्तै चुस्ने फनेल छ ... र कसैले पनि यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन।
हामी तीनौ माध्यमहरु फेरि हेरौं:
गुगल: पुग्छ, प्लेसमेन्ट, र ईन्टेन्ट छ
फेसबुक: पुग्यो - तर यो राम्रोसँग राख्दैन
twitter: प्लेसमेन्ट छ, पहुँच बढ्दै छ तर अझै बजारमा एक सानो खेलाडी
२०० in मा खोज इञ्जिन रणनीतिहरू
अर्को शब्दमा, खोज इञ्जिनहरू - विशेष गरी Google, केवल त्यस्ता चीजहरू छन् जुन तपाईं सही दर्शकहरूमा पुग्न चाहानुहुन्छ (सान्दर्भिक खोजीहरू तपाईंको व्यवसाय खोज्दै हुनुहुन्छ?), दुबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्लेसमेन्ट प्रदान गर्दछ (प्रत्यक्ष = जैविक परिणामहरू, अप्रत्यक्ष = भुक्तान प्रति क्लिक परिणामहरू), र आशय (प्रयोगकर्ताले खोजिरहेको थियो) तपाईं).
२०० For को लागि, तपाईको फोकस बजार सेयर क्याप्चर गर्नका लागि पर्छ खोज इन्जिनहरू समावेश गर्नुहोस्। उनीहरूको ब्लगि E्ग इभान्जेलिज्मको उपाध्यक्षको रूपमा, मैले तपाईंलाई नदेखीएको खण्डमा म छोडिदिनेछु कार्बनिक खोज मार्फत सीसा क्याप्चरको लागि उत्तम समाधान.
टैग: twitterट्विटर वृद्धि
ब्लगर ह्याट एसईओ को लागी ब्लगर
जनवरी 10, 2009 मा 11: 32 एएम
तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो:
यदि तपाइँका लक्षित दर्शकहरू विश्वभरका हरेक प्रमुख शहरहरूमा सोशल मिडिया अधिवक्ताहरू हुन् भने, ट्विटर जाने बाटो हो, IMHO। इन्टरनेट प्रोटोकल (विचार, विचार, संगीत, इतिहास, कला आदि सहित) मार्फत बेच्न सकिने जुनसुकै कुरामा प्रकाशको गतिमा विश्वभर एक अर्ब मानिसको सम्भावित श्रोताको आकार हुनेछ।
अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशबाट मेरा अनुयायीहरू छन्। तपाईलाई यो ट्विटरको सबैभन्दा ठूलो बिक्री बिन्दु हो जस्तो लाग्दैन? यो नि: शुल्क छ भन्ने तथ्यसँग जोडिएको छ।
जनवरी 10, 2009 मा 11: 38 एएम
म कसैलाई ट्विटर प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने अन्तिम व्यक्ति हुनेछु। 🙂 यदि तपाइँको एनालिटिक्सले अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ कि Twitter जहाँ संलग्नता र रूपान्तरणहरू आउँछन् - त्यसपछि यसको लागि जानुहोस्! मलाई लाग्छ कि धेरै मानिसहरूले फेला पार्नेछन् कि खोज इन्जिनहरूले उनीहरूका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने तुलनामा यो फिक्का हुन्छ।
खोज इन्जिनहरूले तपाईलाई के गर्ने वा के छ भनेर खोजिरहेका मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रदान गर्दछ। Twitter त्यति प्रत्यक्ष छैन... तपाईलाई फेला पार्न र तपाईसँग जोडिन मानिसहरूलाई थोरै काम लाग्छ।
एमी टिप्पणी गर्नुभएकोमा धन्यवाद! अर्को Tweetup मा तपाईंलाई भेट्न उत्सुक छु।
वेब निर्देशिका Gal
जनवरी 13, 2009 मा 2: 54 एएम
मलाई व्यक्तिगत रूपमा twitter को बारे मा मनपर्छ र अझै पनि म यसलाई प्रयोग गर्न सक्दिन, मलाई लाग्दैन कि म यसमा एक्लै छु। म चलचित्र हेर्न जाँदैछु वा कफी किन्न लागेका मानिसहरूको ठूलो समूहलाई आन्टी बेट्सीको कुकुरका चालहरूबारे सुन्न चाहेको भन्दा बढि बताउन मलाई कुनै आग्रह छैन।
म व्यस्त छु, मैले स्निपेटहरू पढ्नुको सट्टा सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्लगहरू पढ्छु र मलाई यो मनपर्छ!
मैले भर्खरै थप्न चाहान्छु कि गुगल र फेसबुक दुबै ट्विटर-म्यानियाको संस्थापक नभएकोमा आफैंलाई लात मारिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन ट्राफिकको मात्रा पनि ट्राफिक संलग्नता जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैन। जब म साधारण परियोजनाहरूमा काम गरिरहेको छैन म ग्राहकहरूको लागि सम्बद्ध सम्बन्धित साइटहरू निर्माण गर्दैछु र म धेरै धेरै सक्रिय र रूपान्तरण ट्राफिक बनाम मास पास-थ्रु ट्राफिकको सानो मात्रालाई प्राथमिकता दिन्छु।
मलाई गुगल र फेसबुकका दुबै कार्यकारीहरूले ट्विटर आइडियामा सुनौलो हंस गुमाए जस्तो महसुस भएको छ।